Iindaba - Ubungakanani beMarike yeNqwelo yeGalufa [2022-2028] ukuya kwi-USD 2.55 yebhiliyoni, kwi-6.0% CAGR |I-Fortune Business Insights-HDK Dealership Franchise Iyafumaneka ngoku!
Ubungakanani beMarike yeNqwelo yeGalufa [2022-2028] ukuya kwi-USD 2.55 yeBhiliyoni, kwi-6.0% CAGR |I-Fortune Business Insights-HDK Dealership Franchise Iyafumaneka ngoku!
Elona XESHA LONA LONA IXESHA LOKUNGENA KWIENTENGISO ZENKQUBO YEGALUFU-BHALISA UKUBA NOMTHENGISI NGOKU !
Ehlabathini jikeleleimarike yenqwelo yegalufaUbungakanani kulindeleke ukuba bufike kwi-2.55 yeebhiliyoni zeedola ngo-2028 kwaye bubonise i-CAGR ye-6.0% ngexesha loqikelelo.Ukufakelwa kombane okukhawulezayo kolu shishino kunye nokunyuka kophuhliso lwebala yegalufa kuqikelelwa ukuba kuya kukhulisa ukukhula kwemarike."IMarike yeNqwelo yegalufa, 2021-2028".Ubungakanani bemakethi bemi kwi-USD 1.62 yebhiliyoni ngo-2020 kunye ne-USD 1.69 yebhiliyoni ngo-2021. Ukongeza, ukuhla kweendleko zeemoto zegalufa zombane kuqikelelwa ukuba ziya kuthanda ukukhula kwemarike kwiminyaka ezayo.
.Meyi 2020:HDK Electric VechileIphindwe kathathu isabelo sayo semarike .
.Epreli 2021:Imoto yeklabhuyi-Ingersoll Rand yafunyanwa yiPlatinum Equity nge-USD 1 yebhiliyoni.
.Epreli 2022 :Imoto yeklabhuifunyenweImoto yegalufa yeGariat .
Izinto zokuKhula kwiMarike:
“UkuNyusa koMbane ukukhulisa uLwahlulo lweMarike:
Ishishini leemoto liyakhula ngokusungula izisombululo ezilungele indalo nezisebenzayo.Oku kwenzeka ngenxa yokunyuka kokufakelwa kombane kwezithuthi ngenxa yemithetho engqongqo yokukhutshwa kombane.
Ukwaziswa kwemigaqo engqongqo yokukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo eziphunyezwa ngoorhulumente kuqhubela phambili imfuno yezithuthi zombane, kwaye oku kukwanyuse nemfuno yeemoto zegalufa zombane.
Nangona uninziiimoto zegalufaezikhoyo ngoku zinamandla ombane, abavelisi abakhulu bagxininisa ukusungulwa kweemoto zegalufa zombane zanamhlanje ezinomthamo ophuculweyo webhetri kunye noluhlu lokuhamba.Ezi zinto kulindeleke ukuba zibe zizinto eziphambili eziqhuba ukukhula kwemarike yenqwelo yegalufa kwihlabathi kwiminyaka ezayo.
Ngenxa yokwanda kokwamkelwa kweemoto zombane, amaxabiso azo nawo aye ehla.Ubuninzi bemveliso yeemoto zegalufa zombane kusenokwenzeka ukuba zibe nesiphumo sokunyuka kwemfuno yemveliso kunye nokuthanda ukukhula kwemarike.
Ukunyuka kwemfuno yeemoto zegalufa ngenxa yesantya esisezantsi ngeenjongo zokhenketho nako kulindeleke ukuba kuphembelele ukukhula kwemarike.
Okokugqibela, uphuhliso lwamabala egalufa amatsha kunokwenzeka ukuba ludale ukukhula okunengeniso kwimarike.
Ngokwemiqathango yempembelelo yexesha elifutshane kunye nexesha elide leI-COVID-19 kwimarike yenqwelo yegalufa,
“UMntla Merika Uza Kubamba Isabelo Sengonyama”
Kuqikelelwa ukuba uMntla Merika uza kulawula imarike yenqwelo yegalufa kwihlabathi kwiminyaka ezayo.I-US yenza esona sabelo siphezulu semarike kwaye iqhutywa bubukho obuninzi bamabala egalufa kummandla.Ngaphezu koko, abadlali abaphambili, kuqukaI-Textron Inc., Yamaha Golf-Car Company, kunye nabanye abakhoyo kulo mmandla kulindeleke ukuba bancedise ukukhula kommandla.
IYurophu kuqikelelwa ukuba iza kuba kwindawo yesibini kwimarike yehlabathi.Inani elikhulayo leendawo zokuchithela iiholide zabantu abadala kunye neelali kunye nokukhulaukhenketho lwegalufakuqikelelwa ukuba zonyusa ukukhula kwemarike yommandla.
I-Asia Pacific kulindeleke ukuba ikhule kakhulu kule minyaka izayo ngenxa yokukhula kokuthandwa kwegalufa kunye nokunyuka kwamanani abadlali begalufa.
Uhlobo lweMveliso, iSicelo, kunye neNgingqi zifundelwa iMarike.Ngokwesiseko sohlobo lwemveliso, imakethi iphindwe kathathu kwilanga, ipetroli, kunye nombane.Ngokwesiseko sokusetyenziswa, imakethi yahlulwe ngokweenkonzo zorhwebo, iinkonzo zomntu, kunyeikhosi yagalufa.Ngokwendawo, imakethi yahlulwe eYurophu, eAsia Pacific, kuMntla Merika, nakwihlabathi liphela.
Abadlali abaPhambili bagxininisa iNtsebenziswano kunye neNtsebenziswano ukuze babambe ukukhula
Imakethi yahlulwe ngokufanelekileyo kwaye ibandakanya abadlali bamazwe ngamazwe kunye nengingqi abakhuphisanayo entanyeni ukuya entanyeni.Bamkela intsebenziswano kunye nentsebenziswano, phakathi kwezinye izicwangciso, ukufumana ukukhula.Njengokuba,Inkampani yeGalufa yeYamahaibhengeze ukwandiswa kobudlelwane bayo ngoJanuwari 2021 kunye neNational Golf Course Owners Association (NGCOA).
Uluhlu lwabadlali abaPhambili kwiMarike:
Inkampani yeGalufa yeYamaha (eGeorgia, eMelika)
I-Evolution Electric Vehicles (CA, US)
I-Texron Inc. (i-Rhode Island, e-US)
Isithuthi soMbane se-HDK(FJ ,CN)
I-Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co. Ltd. (eSuzhou, eTshayina)
I-CLUB CAR (Georgia, US)
I-JH Global Services Inc. (eMzantsi Carolina, e-US)
Columbia Vehicle Group Inc. (Wisconsin, US)
Ixesha lokuposa: May-03-2022